हिन्दु धर्मबारे जनमत संग्रह -डा. शशांक कोइराला - Suvham News
हिन्दु धर्मबारे जनमत संग्रह -डा. शशांक कोइराला
August 22, 2018 by gsmktm
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालेले हिन्दु धर्मबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल प्रेस यूनियनले बुधबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री कोइरालाले ८० प्रतिशत हिन्दुको रक्षाका लागि जनमत संग्रह आवश्यक भनेको बताए। उनले भने, ‘८० प्रतिशत हिन्दु छन्। किश्चियनले धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन्। अब धर्मका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्छ।’
उनले जनमत संग्रहलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।’धर्मका विषयमा अझैं लामो विवाद हुन दिनु हुन्न। जनमत संग्रहमा जानुपर्छ। जसले जे मा मतदान गर्छ गर्न दिनुपर्छ। जनतालाई नै यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ’ उनको भनाइ थियो।
वर्तमान सत्तागठबन्धन कांग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको भन्दै उनले सशक्त प्रतिपक्षी बन्न पार्टी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘पार्टीभित्र गुट उपगुट बनाएर होइन। राष्ट्रकै आवश्यकता कांग्रेसका नेता एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ’, उनको सुझाव थियो, ‘एकताबद्ध भएनौ भने गठबन्धनको सामना गर्न नसकेर पार्टी अस्तित्व नै खतरामा पर्छ। अब आत्मालोचना गरेर अघि बढ्नु पर्छ।’
स्थानीय सरकारले वृद्धि गरेको करले महंगीमा परेका जनतालाई सताएको उनको जिकिर थियो। पार्टीले जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक कर नलिन निर्देशन दिएको उनले बताए।६ महिने अवधिमा सरकारको समीक्षा गर्दै उनले ठोस काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।
पार्टी महासमितिको बैठक चाँडै डाकेर मूल विधानलाई २०/२५ वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपर्ने गरी पार्टीलाई संघीय ढाँचामा लैजाने तयारी भएको पनि उनले जानकारी गराए।
Prevप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार गृहजिल्ला झापा पुगेका छन्
Nextजनै फेर्ने चलन , जनै धारण गर्नुको कारण